Yintoni eyenziwa ngoplastiki eyenziwa nguOlga Orlova: ngaphambi nangemva kokufotwa kweplastiki
Ukunyamekela ukuhlinzwa ngoplastiki akupheli kakuhle. Ngamanye amaxesha ukungenelela kokungenelela kukhokelela kwisiphumo esingathandekiyo, esingenako ukulungiswa nangona ngcali. Ukungaphumeleli nakubantu abadumileyo obonakalayo obaluleke kakhulu abafaki i-insured. Amafayili kunye neentshabalalo zisabela ngokukhawuleza kuyo nayiphi na inguqu yodumo. Musa ukunyanzelisa nabo abo badala begqityiwe umsebenzi wokubonisa ibhizinisi. Ngokomzekelo, kutshanje kwiintanethi zentlalo kukho ingxoxo esebenzayo malunga nokubonakala kuka-Olga Orlova - soloists of band eyaziwa ngokuba yi "Brilliant".
Iifoto zika-Olga Orlova kwiiplastiki
Uqeqesho luka-Olga Orlova lwaqala ekuqaleni. Sekuneminyaka engama-18 ubudala waba ngumdlali wecandelo lamaqela aseRussia "oMangalisayo".
Le projekthi entsha yafika ngokukhawuleza ukuba ithandwa, kuba ingqiqo yayo yayilula kwaye iqondakala kubantu: abantombazana abancinci be-naked bathelela kumculo wesiqhelo baze bahlabelele iingoma ngokubhaliweyo.
Njengengxenye yeqela elithi "Ulungelelwano" u-Olga ludwelwe de kube ngu-2000, kodwa ndiyakhumbula abalandeli ngemifanekiso enomdla kunye noshintsho oluqhelekileyo kumfanekiso.
U-Olga Orlova waqala njani ukujonga iiplastiki
Ngo-2000, u-Olga Orlova washiya iqela labo elidumileyo ngenxa yokukhulelwa, waza waqala umsebenzi wokuzimela. Iimvavanyo ezizodwa ngokubonakala kwayo umculi akazange aqhube aze abuke ngokuhambelana neminyaka yakhe.
Kucacile kwakusisifo seplastiki kuphela, xa u-Orlova ethatha inxaxheba kwiprojekthi ethi "The Hero Hero" ngo-2002. Iifoto zeso sihlandlo zibonisa ukuba umqhubi uthatha isimo esingaqhelekanga.
Akunakwenzeka ukuba angaboni ukuba kwiifoto zokuqala, ubungakanani be-Olga bubele kakhulu. Kodwa umculi akazange akhulume ngeenguqulelo.
Iifoto zika-Olga Orlova ngo-2017
Ngo-2017 uAlga Orlova waphenduka iminyaka engama-40 ubudala. Kwiminyaka emibili ngaphambili, umculi wagqiba ekubeni aphinde aqhubeke nomculo wakhe, ebonisa iintlobo ezitsha kuluntu. Ukongeza, i-soloist yangaphambili ye "Brilliant" yanquma ukuzizama njengombonisi weTV kwi-scandally famous revel show "Dom-2". Nangona kunjalo, utshintsho kwi-appearance ka-Olga paparazzi kunye nabalandeli baqaphela nangaphambili. Ngonyaka ka-2012, inkwenkwezi yabonwa kwiimeko ezininzi zomhlaba kunye noluntu. Ubuso bomculi bungazange bube bukhohlakele, inxalenye yayo yanyanzeleka, ukulinganisa imibimbi yaba yincinci. Iingqungqelo zatshintshile: i-cheekbones yaba yinto evelele ngakumbi, amehlo athambileyo, imilomo yaqina kwaye yatshintsha isimo. Ngaloo ndlela, nge-34, inkwenkwezi yaqala ukubonakala ikhulile kuneminyaka yayo.
Namhlanje, ukubonakala kuka-Olga kuya kutshintsha kwakhona. Okokuqala, walahlekelwa ubunzima obukhulu. Okwesibini, ababhalisi abanamkelekileyo baqwalasela indlela eluhlaza ngayo ubuso bakhe nentamo. Ukwahlukana, okubonakaliswa ngokucacileyo ngemifanekiso "phambi" nangemva "emva," ngokukhawuleza ubambe iso lakho.
Amafayili womculi wabuye waxoxa ngesimo sakhe seempumlo. Ukuba uthelekisa imifanekiso yamaxesha ahlukeneyo, uyabona ukuba impumlo ibe yinto efihlakeleyo kunye nenhle.
U-Orlova ngokwakhe akazange afihlile isimo sakhe sengqondo sokuba "injongeni yobuhle" kunye nophando lweplastiki, kodwa akazange avume ngokucacileyo ukuba wayesebenzela iinkonzo zeengcali. Nangona kunjalo, utshintsho "lujongene". Ngaba ucinga ukuba bazuze u-Olga?
Amadoda angaphumelelanga uSvetlana Permyakova, okanye Yintoni ekhokelela kwisifiso esinamandla sokuba nosapho
Yintoni eyenzekayo ebusweni bukaVera Alentova: iifoto ngaphambi nangemva kokuhlinzwa kweplastiki
UVera Brezhneva kunye noConstantin Meladze: ibali lomthando
Umtshato weFyodor Bondarchuk noPaulina Adreeva: inkolelo okanye inyaniso? Iindaba zamva kunye nezithombe zangasese ezivela kwi-Instagram
I-Lumbago ivule i-fluffy darling entwasahlobo
Ikhusi kunye nokubuyiswa kwe-backage
Isaladi kunye nenyama kunye ne-apula
Ukuhlamba ukuhlamba kunye nokuvuyela umzimba
Ukukwazi ukudibanisa iinaliti: izixhobo, iingcebiso, iimfihlelo
Ivekile: Iveki eNgcwele ngaphambi kwePasika
Imilenze yenkukhu kwi-oven microwaves
Inombolo nomgangatho wesini emtshatweni
Fritata kunye namazambane kunye nepepper elimnandi